Thu, Jul 2, 2020 at 11:17am
काठमाडौँ, २६ असार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष गिरीले सहमतिले तल्लो तहका उद्यमीसम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउन सहज हुने..
कर्मचारी सञ्चयकोषले आधार मूल्यमै किन्यो सिभिल बैंकको साढे १७ लाख संस्थापक शेयर
काठमाडौं, २५ असार । सिभिल बैंकको साढे १७ लाख संस्थापक शेयर कर्मचारी सञ्चयकोषले किनेकाे छ । सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर आधार मूल्यमै कारोबार भएको छ। बैंकले संस्थापक शेयरधनी सिर्जना शाक्यको शेयर बिक्रीको लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो। बोलकबोलको क्रमममा शाक्यको शेयर कर्मचारी सञ्चयकोषले आधार मूल्यमै पाएको हो। शाक्यले आफ्नो नामको १७ लाख ५३ हजार ५९४ कित्ता शेयर कर्मचारी सञ्चयकोषलाई बिक्री गरेकी हुन्। बोलकबोल..
प्रदेश २ सरकार आफ्नै स्वामित्वमा छुट्टै बैंक स्थापना गर्दै
काठमाडौं, २४ असार । प्रदेश नम्बर २ सरकारले आफ्नो छुट्टै बैंक स्थापना गर्ने भएकाे छ । प्रदेश २ सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा प्रदेशस्तरको छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको हाे । बैंक स्थापनाका लागि गृहकार्य गर्न प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजना..
असिमित समय दिइदैन, मर्जरको नीतिलाई सहयाेग गर्नुस् : गभर्नर चिरञ्जिबी नेपाल
काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले १० बर्षअघि ५० करोडको पूँजी २ अर्ब पुर्याउन असीमित समय दिँदा पालना नभएको उदाहरण दिदैँ नियामकले नीति कार्यान्वयन गर्न असीमित समय कसैलाई नदिने बताएका छन् । उनले चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याएका गभर्नरले दोस्रो चरणमा मर्जर गर्ने नीति लिएका बेला समय लगाएर मर्जर गर्नु पर्ने सुझाबमा नियामकले असीमित समय नदिने बताउँदै राष्ट्र बैंकलाई सहयोग अनुराेध गरेका..
डोयच बैंकले कर्मचारी कटौती गरेपछि १८ हजारकाे जागिर धरापमा
काठमाडौं, २३ असार । विश्वका धेरै देशमा उपस्थिति रहेको डोयच बैंकले १८ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएकाे छ । बैंकले कर्मचारी कटौती गर्ने भएपछि १८ हजार कर्मचारीकाे जागिर धरापमा परेकाे छ । आफ्नो प्रतिष्ठा र व्यापार जोगाउनका लागि बैंकले कर्मचारी कटौती गर्न लागेको हो । बैंकको कुल कर्मचारी संख्याको २० प्रतिशतलाई जागिरबाट बिदा दिन लागिएको हाे । प्रमुख कार्यकारी क्रिस्चियन सिविङले मे..
मर्जरमा जान १६ बाणिज्य बैंकले जनाए प्रतिबद्धता, अटेर गर्ने कुन कुन ?
असार २३, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मर्जरका लागि प्रतिबद्धता लिएर आउन निर्देशन दिएपछि १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति गर्ने जनाएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, १६ वटा बाणिज्य बैंकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने विकास बैंकमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक छ। लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि सबै संस्था मर्जरमा जान तयार रहेको प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ। फाइनान्स..
बिग मर्जर : ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक एकापसमा गाभिदै, पर्शुराम कुँवर कार्यकारी
काठमाडौ, २० असार । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले एकापसमा गाभिने सहमति गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकलाई एकापसमा गाँभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति राखेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिप्रेरित गरेको सन्दर्भमा ती दुई बैंक एकापसमा मिसिने निर्णय गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ..
शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीद्वारा सिभिल बैंककोे दौबहाल शाखाको उद्घाटन
काठमाडाैं, १९ असार । वाङ्गमय शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीले सिभिल बैंकको रन्जना लिपि सहितको परिचय पाटी राखिएको दौबहाल शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । “समृद्धिको लागि सिभिल बैंक” भन्ने नाराका साथ अगाडी बढीरहेको सिभिल बैंकले नेपाली बैंकहरुमै पहिलो पटक रन्जना लिपिको प्रयोग गरी आधिकारिक परिचय पाटीको प्रयोग सिभिल बैंकको दौबहाल शाखाबाट प्रारम्भ गरेको हाे । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले दौबहाल क्षेत्रको बढ्दो..
अब जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले ओम हस्पिटलको विशेष छुट पाउने
ठमाडौं, १९ असार । अब जनता बैंक लिमिटेडका ग्राहक तथा कर्मचारीले ओम हस्पिटलएण्ड रिसर्च सेन्टरमा विशेष छुट पाउने भएका छन । बिहीबार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका अश्रितहरुलाई स्वस्थ्य सेवामा छुट दिन जनता बैंक र ओम हस्पिटलबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा हस्पिटलका प्रवन्ध सञ्चालक बाबु्काजी कार्की र जनता बैंक चाबहिल शाखाका शाखा प्रवन्धक सुरेश गौतमले हस्ताक्षर गरेका हुन्..
नबिल बैंक र बिराटनगर अस्पतालबीच सम्झौता, ग्राहकलाई सेवामा छूटको व्यवस्था
काठमाडौं, १८ असार । नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राख्दै बिराटनगर अस्पतालसँग एक सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता अनुशार बैंकका डेबिट, प्रिपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले बिराटनगर अस्पतालमा विशेष छुट र सुविधा पाउने छन् । नबिल बैंक र बिराटनगर अस्पताल अर्थात् बिराट नर्सिङ होम एण्ड बिराट मेडिकल कलेजबीच भएको उक्त सम्झौता बमोजिम अस्पतालले बैंकका डेबिट, प्रिपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता..
पाँचतारे म्यारियट होटलमा भित्रियो डेल्टइन क्यासिनो
असार १८, काठमाडौं । गत केहि महिना अगाडी सञ्चालनमा आएको म्यारियट होटलमा डेल्टइन क्यासिनो भित्रिएको छ । नक्साल स्थित पाँचतारे होटल म्यारियटमा भारतीय प्रख्यात ग्रुप डेल्टइनले क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको छ । भारत, श्रीलङ्का, सिङ्गापुरलगायतका देशमा दरिलो उपस्थिति जनाएको ग्रुपले पहिलो पटक नेपालमा पनि प्रबेश पाएको छ । यो ग्रुपले भारतको गोवा, सिक्किमलगायतका धेरै स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । म्यारियट..
जनता, हिमालयन र सेञ्चुरी बैंकद्धारा ४६५ जना कर्मचारी माग, यस्ताे छ याेग्यता !
असार १८, काठमाडौं । अहिले वित्तिय संस्थाहरू बीच बिग मर्जरको लहर तथा बहस चलिरहेको छ । बहस चलिरहेको बेल तीन बैकल ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेका छन् । जनता, हिमालयन, सेञ्चुरी गरी तीन बैकले ४६५ जना कर्मचरी माग गरेका हुन् । जसमाजनता बैंक नेपालले २०० जना कर्मचारी माग गरेको छ भने सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले १७९ जना कर्मचारी माग गरेको छ। हिमालयन बैंकले..
बिग मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकबीच छलफल तिव्र, गर्भनर भन्छन् - मौद्रिक नीति अगावै ‘लभ’ गर्नुस्
काठमाडौँ, १७ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन (मर्जर) प्रेरित गर्ने नीति सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले छलफल तिव्र पारेका छन् । एक आपसमा गाभिनका लागि तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठक आयोजना गरियो । बैठकमा एक आपसमा गाभिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले..
लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत २४ अर्ब २९ करोडको बोनस सेयर
काठमाडौं, असार १७ धितोपत्र बोर्डमा २४ अर्ब २९ करोड २ लाख ५६ हजार ५ सय १७ रुपैयाँको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। २०७६ असार ८ गतेसम्म बोर्डमा २४ करोड ८८ लाख ९७ हजार ६ सय ११ कित्ता सेयर दर्ता भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन लाग्दा बैंक, बीमा, हाइड्रोपावर, होटल, वित्तीय संस्थासहितका कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई दिएका बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका..
सिभिल बैंकको ८६ औं शाखा बर्दियाको सितला बजारमा
बर्दिया, १७ असार । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बर्दियाको सितला बजारमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले गर्नुभयो । शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकको प्रदेश नं. ५ का प्रदेश प्रमुख किरण धमला, सो क्षेत्रका राजनैतिक ब्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी लगायतको उपस्थिति थियो । यसैबीच, सितला बजार शाखा सहित..
काठमाडौँ, १६ असार तारकेश्वर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत महिला स्वयंसेविकाका लागि स्वास्थ्य र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वयंसेविका खटिनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य र जीवन बीमा गर्ने निर्णय गरिएको नगर स्वास्थ्य शाखाप्रमुख अरुणकुमार गिरीले बताउनुभयो । यसबाट उनीहरुलाई काम गर्न थप हौसला मिल्ने उहाँको भनाइ छ । “बीमाले उपचारसँगै उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ”,..
ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म जनता बैंक, एकैसाथ ६ नयाँ शाखाबाट कारोवार सुरु
काठमाडौं, १६ असार । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले सोमबार एकैसाथ काठमाडौं उपत्यकामा ३ र अन्य स्थानमा ३ गरी एकै साथ ६ शाखाको उद्घाटन गरी कारोबार सुभारम्भ गरेको छ । बैंकले नयाँ ठिमी भक्तपुर, पाटन सुन्धारा, किर्तिपुर काठमाडौं, फिदिम पाँचथर, मन्थली रामेछाप र डुम्रे तनहुँमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ खोलिएका शाखाहरुबाट सो क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सबै प्रकारका निक्षेप..
गाउँमा बैंक पुगेसँगै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि, स्थानीय तहबाटै कारोवार गर्न सजिलो
रुकुमपूर्व, १५ असार । तीन वटा मात्र स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वको सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थालेको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकका शाखा स्थापना भएसँगै स्थानीय तहबाटै कारोवार गर्न सजिलो भएको छ । भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले भन्नुभयो, “बैङ्क..
सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा कैलालीको भजनीमा खुल्यो
कैलाली, १२ असार । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा कैलालीको भजनीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन भजनी नगरपालिकाका मेयर शेर बहादुर चौधरीले गर्नुभयो । शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकको प्रदेश नं. ७ का प्रदेश प्रमुख दिपक जोशी, सो क्षेत्रका राजनैतिक ब्यक्तित्वहरु, उद्योगी, व्यवसायी, गन्यमान्य ब्यक्ति तथा सर्वसाधरणको समेत उपस्थिति थियो । भजनी शाखा..
धनगढी, ६ असार । गत जेठ २३ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको धनगढी आसपासमा आएको भिषण हावाहुरीमा परी पीडित हुनेहरुका लागि जनता बैंकले आफ्नो तर्फबाट नगद आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले संचालन गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिका प्रकोप ब्यबस्थापन कोष’ लाई रु. १ लाख ५० हजार नगद सहयोग उपलब्ध गराएको बैकले जनाएको छ । उक्त सहयोग रकमको चेक बैंकको सुदरपश्चिम..
सुर्खेत, ०२ असार । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बीरेन्द्रनगरपालिकाको सुर्खेतमा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्कीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरुका बीच कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले र लम्की चुहा नगरपालिकाको मेयर महादेव बजगाईंले क्रमश सुर्खेत शाखा र लम्कीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले..
काठमाडौं, ३२ जेठ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले यसै साता काठमाडौं उपत्यकामा ३ र अन्य स्थानमा ३ गरी एकैसाथ ६ शाखाको उद्घाटन गरी कारोबार सुभारम्भ गरेको छ । बैंकले नयाँ ठिमी भक्तपुर, पाटन सुन्धारा, किर्तिपुर काठमाडौं, फिदिम पाँचथर, मन्थली रामेछाप र डुम्रे तनहुँमा नयाँ शाखा शुभारम्भ गरेको हो । मन्थली शाखाको उद्घाटन मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार बस्नेतले गर्नुभयो । उक्त समुद्घाटन कार्यक्रममा..
काठमाडौँ, ३१ जेठ केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा नै ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै आएको छ । सोही क्रममा आगामी असार २ गते पुनः रु आठ अर्ब २३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत बोलकबोलका माध्यमबाट उक्त टे«जरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । बैंकले यही जेठ २७ गते पनि त्यस्तै टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो..
काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि तयार रहन सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सचेत गराएको छ । नेपालले एक महिनाभित्र लघुवित्त मर्जर नभए कडा नीति ल्याउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मर्जरका लागि तयार रहन सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउन टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको लघुवित्त..
काठमाडौं, २९ जेठ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको श्रम स्वीकृति र नविकरण शुल्क बैंकमार्फत नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले मंगलबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै सबै बाणिज्य बैंकलाई सेवा सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिन भनेको छ । आवेदन दिन समय १५ दिनको राखिएको छ । बोर्डका अनुसार हाल सातवटा बाणिज्य बैंकले मात्र अनुमति लिएर काम गर्दैै आएका छन्..
काठमाडौँ, २८ जेठ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एशियाकै सुदृढ रहेको बताउनुभएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष भवनको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन बैंकको क्षमता बढाउने, कारोबारलाई सुरक्षित बनाउँदै बैंकप्रति विश्वसनीयता बढाउन तथा परदर्शीता ल्याउन विभिन्न कदम चालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निष्क्रिय कर्जा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, सम्पूर्ण परिसूचकमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली..
सिराहा, २८ जेठ । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा सिराहा जिल्लाको गोलबजारमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन सोमबा एक कार्यक्रमबीच गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ साहले गर्नुभयो । उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ साह, पत्रकार महासंघका सभापति राम बाबु यादव, प्रहरी निरीक्षक नविन घिमिरे तथा सिभिल बैंक प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख..
काठमाडौं, २६ जेठ । केही महिनाअघि ‘घातक रोग सुविधा योजना’ ल्याएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले फेरि अर्को सेवाग्राहीमुखी योजना बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आजै अर्थात् आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी ‘सदावहार जीवनका लागि सदावहार जीवन बीमा योजना’ भन्ने नाराका साथ ‘नेपाल लाइफ सदावहार जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको हो । एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक कम्पनीले आफ्ना उच्च अधिकारी र एजेण्टहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका..
काठमाडौँ, २४ जेठ नेपाल राष्ट्र बैंकले चार अर्ब नौ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत यही जेठ २७ गते सोमबार उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । बैंकले यसअघि पनि रु पाँच अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला दिनमा टे«जरी बिल र रिपोमार्फत तरलता..
Results 522: You are at page7of 18